1aviagem.com - 2 2 Page - Atụmatụ, mkparịta ụka, akụkọ ndị otu onye na-amanye oge mbụ kwuru
Canada - lee ala ala Niagara Falls?
Taa, anyị ga-aga Niagara Falls. Ịhapụ Toronto, ị ga-esi ụgbọ okporo ígwè rute Niagara Falls. Ọ dị ihe dịka awa abụọ site na okporo ụzọ okporo ụzọ. na ego nke $ 24,86 CAN (Dollar Dollar). Na klas akụ na ụba nke dị mma site n'ụzọ. Ụgbọ oloko nwere kichin, wifi, ime ụlọ ịwụ na ...
GỤKWUO Canada - lee ala ala Niagara Falls?
Njem mbụ gaa Thailand. Ụlọ nsọ, Atụmatụ, locomotion.
Kedu ihe ọ na-adị ka ịnọ na Thailand? N'ebe a, anyị ga-ekwu ntakịrị banyere ụzọ njem, ntụziaka banyere esi esi ebe ahụ, ịmata ihe na ihe ị ga-eme. Bịa? Kedu esi enweta ebe ahụ? Tupu ịbịaru ebe ahụ, ọ bụ iwu na ị ga-enweta ogwu megide ọrịa ọkụ. Mba ụwa. Ọfọn, ọ bụrụ na e nwere otu ihe nwere ike ime ka ị ghara ịga njem gị ...
GỤKWUO Njem mbụ gaa Thailand. Ụlọ nsọ, Atụmatụ, locomotion.
Njem mbụ na United States - New York.
Ya mere, olee otu anyi si ekwu banyere United States taa? Obodo a si ebe nnukwu netwọk mmekọrịta dịka facebook, instagram, twitter na nke ikpeazụ onye isi oche nke ugbu a na-eme ka okwu ndị na-arụrịta ụka! Ma cheta na mba nwekwara ọtụtụ exponents na-alụso ịkpa ókè agbụrụ, dị ka Martin Luther King ...
GỤKWUO Njem mbụ na United States - New York.
N'ihi aha 1aviagem?
Aha, a nabatara aha a mgbe m malitere ịwa na youtube. Ọ dị mkpa inwe aha pụrụ iche. Ọwa (ma ugbu a blog) ga-ekwukwa banyere njem. Anaghị m emegharị ugboro ugboro, Ana m eme ya mgbe o kwere mee maka mba ọhụrụ ma ọ bụ ebe ọhụrụ. Ya mere, ọ bụrụ na ị gbanwee njem na njem gaa ebe dị iche, ...
GỤKWUO N'ihi aha 1aviagem?
Kedu ka ị ga-esi jiri ụgbọ mmiri Moscow na-eji ụgbọ oloko Moscow?
Taa bụ ụbọchị nke njedebe ikpeazu nke ụwa na Russia (2018), ọtụtụ ndị na-alọghachikwala n'ụlọ. ikekwe ọtụtụ ndị bụ bọs na ọdụ ụgbọ elu. Ma maka njem nleta, Otú ọ dị, ruo mgbe ọ bara uru iji ụzọ ụgbọ oloko ma mee njem ọzọ tupu ịkwado ịlaghachi n'isi obodo Moscow ...
GỤKWUO Kedu ka ị ga-esi jiri ụgbọ mmiri Moscow na-eji ụgbọ oloko Moscow?
Brazil, atụmatụ banyere Rio de Janeiro
N'ileba anya nloghachi nke ndi otu ndi Brazil, olee ihe banyere ima obere nke Brazil? N'ihi ya, taa anyị ga-ama ihe ndị magburu onwe obodo, bụbu isi obodo nke Brazil, na Tom Jobim ala, Vinicius de Moraes, Chico Buarque, Toquinho (na nke a bụ Paulista!, Ekele maka enyemaka na-agụ, Renato RRSP) na ọtụtụ ndị ọzọ. Ebe Michael Jackson, James ...
GỤKWUO Brazil, atụmatụ banyere Rio de Janeiro
Kedụ banyere Colombia, gịnị ka anyị nwere ike ịgụ?
GỤKWUO Kedụ banyere Colombia, gịnị ka anyị nwere ike ịgụ?
GỊNỊ ka ọ bụ na olee otú? Ee, ị nwere ike ịchekwa ego.
Ndewo onye ọ bụla, nke a kwesịrị ịbụ post ngwa ngwa. N'ime ya anyị ga-ekwu maka STOPOVER! (Gịnị bụ ihe ahụ?) Stopover, abụghị ihe ọ bụla karịa njikọta n'etiti ogologo ụgbọ elu, ịgbanwe n'ime ụmụaka bụ ikpe nke enwere ike ịkwụsị site na ịmara ebe ahụ ma gaa n'ihu n'otu ụgbọ elu ahụ. O si n'asusu Bekee: “Kwụsị”…
GỤKWUO GỊNỊ ka ọ bụ na olee otú? Ee, ị nwere ike ịchekwa ego.
Singapore - banyere ihe ngosi na Marina Bay Sands
Ma enweghị m ike ịmalite ozi a n'ebughị ụzọ ekele gị ndị nwere mmasị na vidio ahụ ma debanye na channel Youtube 1aviagem, ma nye ya dị ka. Oge eruola iji Singapore ma ọ bụ Singapore gaa na saịtị ahụ. Ya mere, m debere aha m ekele nye unu niile kwadoro oru a ebe ọ bụ na ọwa ...
GỤKWUO Singapore - banyere ihe ngosi na Marina Bay Sands
Ntughari nke ncheta nke Russia.
Ndi oma diri unu ndi n’aga Russia, St. Petersburg, Moscow, Novgorod, wdg. ND TiMỌD is bụ iji nụ ihe ncheta dị ebe ahụ. Rịba ama na “omenkà” Russia nwere ama ama Fabergé Eggs, Matroskas, na ọtụtụ ndị ọzọ. Na ihe ndị enchants bụ nkọwa! Na vidiyo dị n'okpuru, anyị nwere ihe atụ nke Fabergé Egg.…
GỤKWUO Ntughari nke ncheta nke Russia.
Parachute Jump Gịnị ka ọ dị?
GỤKWUO Parachute Jump Gịnị ka ọ dị?
Cambodia: Atụmatụ, Ụlọ Nsọ, Akụkọ na Ụkpụrụ
Mgbe ahụ, ọ bụ oge iji gaa Cambodia, obodo a dị mfe, nke ọma, ma nwee ezigbo enyi. Site ná mmalite mba ahụ emeriworị m maka ihe ọhụrụ na arụmọrụ! Gịnị? Ma Cambodia abụghị obodo dara ogbenye, mba a na-edebeghị? Soro m wee hụ ma ọ bụrụ n'ikpeazụ ị ga-anọgide na-ahụ otu ọhụụ. Atụmatụ: Innovation: Cambodia, ...
GỤKWUO Cambodia: Atụmatụ, Ụlọ Nsọ, Akụkọ na Ụkpụrụ
Kedu ihe m ga-ama tupu ị gaa Russia? (Atụmatụ)
Iji mee njem udo gaa na Russia buru n'uche: 1- Ọ bụrụ na ị bụ onye Brazil, ọ dịghị mkpa ka ị nweta visa, naanị paspọtụ. 2 - Ego Russia bụ Ruble, nke a na-abawanye n'ihe gbasara Real. Ugbu a, 1 Real bara uru dịka 18 Rubles. 3 - Na-ekwu banyere ego, ego na na ATM nwere ike ...
GỤKWUO Kedu ihe m ga-ama tupu ị gaa Russia? (Atụmatụ)
gara aga 1 2